တစ်နေ့တာကို ဘယ်လိုများကုန်ဆုံးချင်လဲ။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လား…ဒါမှမဟုတ် သုန်သုန်မှုန်မှုန်လား…ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်းလား…. ဘယ်လိုမျိုးကုန်ဆုံးချင်တာလဲ။ အားလုံးကတော့ သူတို့ရဲ့ နေ့ရက်တိုင်းကို စိတ်ညစ်စရာတွေကင်းပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးချင်မယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့လည်း နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းသင့်ပါ။ ဒီတော့ ပြောစရာရှိလာမှာက နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာတော့ ဖြတ်သန်းချင်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့လေ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းချင်တယ်ဟုတ် နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။
နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းဖို့ အသင့်ပဲလား……….
နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ဆက်လိုက်ကြဦးစို့။ တစ်နေ့တာကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာက သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ။ ဒီတော့ နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းဖို့ဆိုရင်
အိပ်ရေးဝဝအိပ်တာက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ညတာမှာ အနည်းဆုံး အိပ်ချိန် ၇ နာရီရှိအောင် အိပ်စက်ပါ။ ဒီလိုအိပ်စက်မှုက သင့်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းနေစေပြီး အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်တွေဖြစ်စေလို့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို လက်ယက်ခေါ်လိုက်သလိုဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အဖိုးအခမပေးရတဲ့ အိပ်စက်ချိန်လေးကိုတော့ ပြည့်ပြည့်ဝဝအိပ်ပါ။
မနက်ခင်းနေခြည် နွေးနွေးလေးက သင့်ကိုစိတ်ပျော်ရွှင် စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မနက်စောစောထတာကြောင့် စိတ်ထဲမှာ ကြည်လင်လန်းဆန်းနေစေပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေမှာပါ။ အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့လည်း အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်စေမှာပါ။ ဒီတော့ အလုပ်ကိုစောစောရောက်လို့ အလုပ်ခွင်မှာလည်း ပျော်ရွှင်ရပြီပေါ့။
တရားထိုင်တာက စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာမှာ မနက်စောစော ဒါမှမဟုတ် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ၁၅ မိနစ်လောက် တရားထိုင်ပေးပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်တွေ ပေါက်ဖွားလာမှာပါ။
စက္ကန့် ၃၀ အသက်ရှုပါ
ဒါက ပြောတော့လွယ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျလုပ်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အသက်ရှုတာကလည်း သင့်ရဲ့တည်ရှိမှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးနေတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့။ ဒါကြောင့် တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်ထားပြီး ၁ ကနေ ၃ အထိရေလို့ နှာခေါင်းကနေရှုသွင်းပါ။ ပြီးရင်တော့ ၊ ၅ လို့ရွတ်လို့ ပါးစပ်ကနေ လေရှုထုတ်ပါ။ ဒီလို ၅ ကြိမ်လုပ်ပါ။
၂ မိနစ်လောက် ငြိမ်ငြိမ်နေပါ
တစ်နေ့တာမှာ ကြီးကြီးမားမားကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံး ၂ မိနစ်လောက် ဘာမှမလုပ်။ ဘာမှမတွေးဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး ၂ မိနစ်လောက်နေပေးပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့သဘောပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ဘာမှမတွေးဘဲ စိတ်အေးလက်အေးလေးနေပေးပါ။
လမ်းလျှောက်ထွက်တာက စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာလန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက်လမ်းလျှောက်ပေးတာက ဒေါသနဲ့ စိတ်တိုလွယ်မှုတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ တစ်နေကို မိနစ် ၃၀ လောက်လမ်းလျှောက်ဖို့က လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက် လမ်းလျှောက်ဖြစ်အောင်လျှောက်ပါ။ သီးသန့်အချိန်မပေးနိုင်ရင်တောင် ရုံးသွားရုံးပြန် လမ်းလျှောက်ပေးတာမျိုးပေါ့။
ကြင်နာတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေက သင့်ကိုပျော်ရွှင်မှုပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတစ်ပါးကို တစ်နေ့တစ်ခါလောက်တော့ ဖြစ်ဖြစ် ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံပြုမူတတ်ပါစေ။ ဒါက ကိုယ်တိုင်ရော သူတစ်ပါးကိုပါ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုရစေမှာပါ။
နောက်ကွယ်မှာ သူများမကောင်းကြောင်းပြောတာက ကိုယ်တိုင်အတွက် မကောင်းသလို သူတစ်ပါးကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးမရှိတာကြောင့် မလုပ်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ အတင်းမပြောတာက အကောင်းမြင်တဲ့ အတွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး စိတ်ပူပန်မှုတွေကင်းလို့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရစေမှာပါ။
ကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်သူတွေနဲ့ပဲ ပေါင်းပါ။ ညည်းညူတတ်သူတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်ရော အခြားသူတွေကိုပါ ပူလောင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပျော်ရွှင်တတ်သူတွေနဲ့ပဲ ဝန်းရံထားပါ။
ကဲ..ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် အခုပဲ ဒီအလေ့အထလေးတွေကို လုပ်လိုက်တော့လေ။ နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းကြစို့လား……….
Previous Previous post: ဘာကြောင့် နေ့စဉ် တရားထိုင်သင့်တာလဲ
Next Next post: သွားကျဉ်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းများ
မသန်စွမ်းကောင်လေးအတွက် ဝှီးချဲဝင်လို့ရတဲ့ကားတစ်စီးဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ဂျပ်စတင် တင်ဘာလိတ်ခ်
Published: December 1, 202011:03 am Updated: 11:04 am